Ururka dhallinyarada muslinka ee iswiidhen oo kulan sannadeedkoodii qabsadey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Bönestund i moskén
Ururka dhallinyarada muslinka ee iswiidhen oo kulan sannadeedkoodii qabsadey
La daabacay torsdag 12 april 2007 kl 18.18
Week-end-igii la soo dhaafey ayey dhallaan muslimiin ah ee tiradoodu kor u dhaafeyso 800, kana kala yimid qaar ka mid ah dalalka ku yaala Scandanavian-ku ku yesheen muxaadaro afar maalmood socotey, lana soo gabagabeeyey Isniintii, bishuna aheyd 9, xaafad ka mid ah xaafadaha ku yaala magaalada Istockholm.
Kulankaasi oo uu soo qabanqaabiyey urur lagu magacaabo ”Sveriges unga muslimer”, ama dhallaanka muslinka ee Iswiidhen.
Muxaadarrooyinkii goobtaasi ka dhacey ayaa waxyaabihii looga doodey waxaa ka mid ahaa: Muslinnimada iyo Yurub, kaalinta hablaha muslimiinta ah ee bulshada dhexdeeda iyo isku dhacyada kala duwan ee aqoondarradu keento ama sababto.
- Waddada dhexdhexaadka ee miisaaman, waa mid ey waajib tahey iney ku istaagaan dhammaan dadyoowga muslimiinta ahi, haddii ey doonayaan iney bulshada la noolaadaan oo wax la qabsadaan, sida uu qabo quraankuba, arrimmahaasina oo ey ka hadleen wufuud ka kala socotey dalalka Kanada, Ingiriiska iyo Iswiidhenba.
- Waxaa jira dariiq dhexe. Mid miisaaman ee is waafajinaya nolosha adduunka iyo tan aakhiro. Islaamku wuxuu qabaa waddo noocaasiya ee aannu shakhsigu ku talax tageyn midna, haddey noqon laheyd tan adduunka iyo haddey noqon laheyd tan aakhiro.
Diinta islaamkuna waa dariiqii jidkaa dhexe.
Sida uu sheegey gacan yaraha ururka dhallinyarada muslimiinta ee Iswiidhen, Zana Yousef Mohamed.
Ururka ”Sveriges unga muslimer”, waxaa la aasaasey sannadkii 1991-kii. Waa urur ey xubno ka yihiin ururro tiro ahaan kor u dhaafaya 40-tameeyo ee ku kala baahsan dalka baaxaddiisa., halkaasina oo dhallinyarada muslimiintu ku kulmaan sidey uga munaaqashoon lahaayeen sida wanaagsan e dhallinyaradu si wanaagsan dalka ugu noolaan lahaayeen, islamarkaana ayagoo heysta diintooda.
Sida uu sheegey gudoomiyihiin hore ee ururka Mehmet Kaplan, mar uu muxaadaro ka jeedinayey halkaasi Isniintii.
- Fikir aan damacsanaa inaan muxaadaradeyda ku gaarsiiyo waxey aheyd in dhammaanteen ey na saaran tahey masuuliyad, masuuliyaddaasina waxey xambaarsan tahey sidii aan u ahaan laheyn shakhsiyaad leh damiir wanaagsan. Midaa oo lagu gaari karo ku adkaan iyo ku dhegennaansho,
Iyo in laga fekerey maxaan adduunyadan naloo keeney, maxaan dooneynaa iyo sidoo kale xaggaan ku soconnaa.
Sida uu sheegey Mehmet Kaplan, oo ah xubin xisbiga cagaaran ee Miljö u fadhiya baarlamanka.
Hoowlaha uu ururkan u qabto dhallinyarada, waxaa ka mid ah iyadoo xilliga kuleeylaha leysugu geeyo goobo nasasho, iney abaabulaan safarro la xiriira barashada luuqadda gaar ahaan afka carabiga iyo abaabulka ciyaaro kala duwan oo ey ka mid yihiin kubbadda cagta, karateega iyo wixii la mid ah.
Baarliin Nuur waa gudoomiyaha ururka dhallinyarada muslinka ee Iswiidhen. Sida ey gabadhaasi noo sheegtey waxey jagadaasi heysey saddexdii sannadood ee ugu dambeeysey, islamarkaana ey ka tirsaneyd muddo 11 sannadood kor u dhaafeysa.
Baarliin oo aannu weydiiney waxa dhaliyey in ururka gudoomiyenimo loogu doorto, waxey noogu jawaabtey:
- Muddadii uu kulan sannadeedkaasi socdey waxaa iyaguna halkaasi lagu soo bandhigey heeso lagu madadaalinayey dhallaankii kulanka ka soo qeyb galey, hesahan ayaa ahaa kuwo diiniyan ku wajahan, islamarkaana ka duwan heesaha ey dhallaanka inta badan isku madadaaliyaan, kuwaasina oo lahaa oo keliya Rytm eyna ka maqnaayeen qalabka muusikada. Heestanna waxaa qaadayey naeel al Azami.
- Barnaamijkii la xiriirey kulan sannadeedkii ururka ”Sveriges unga muslimer”, intaa ayaan ku soo gabagabeyneynaa.